Soo dejisan Amazon Kindle 1.27.56109 – Windows – Vessoft
WindowsXafiiskaAkhristayaasha E-buuggaAmazon Kindle
Bogga rasmiga ah: Amazon Kindle
Amazon shidin – software ah in uu akhriyo buugaagta shidin oo aan haysan in ay ku xidhmaan qalab shidin si ay kombiyuutarka. software The synchronizes buugaagta la heli karo iyo bookmarks badbaadiyey iyaga in, qoritaan gaaban iyo pages reading la soo dhaafay u dhexeeya qalab iyo computer adigoo isticmaalaya xisaabta user. Amazon shidin leeyahay fudud ah si ay u isticmaalaan ka shaqeynayaan si ay u maareeyaan maktabadda elektarooniga ah adiga kuu gaar ah. software The awood inaad akhrido buugaagta elektarooniga ah ee shaashad buuxda, qaado qoraal yar, xulo size ama nooca font, qabsato dhalaalka, beddelo tirada erayada halkii line, iwm Sidoo kale Amazon shidin ku jira qaamuuska ku haboon in ay muujiyaan karaa macnaha ah erayga la doortay ama ay heli in internetka aan ka tago software ah.
Taageerada qaabab kala duwan oo ka mid ah waraaqaha electronic
.Wadashaqayntaas Buugaagta iyo goobaha u dhexeeya xeesha
Organization of maktabadda elektarooniga ah
Aasaasidda fursadaha kitaabka aad door bidayso
Author macnaha eray ee qaamuuska
Soo dejisan Amazon Kindle
Faallo ku saabsan Amazon Kindle
Amazon Kindle Xirfadaha la xiriira
FBReader – waa barnaamij lagu akhriyo eBooks qaabab kala duwan. Muujinta cad ee miisaska, sawirrada, garaafyada, iyo qoraalada waxaa lagu taageeray qoraalka.
AOL Desktop – barnaamij softiweer ah oo leh adeegyo websaydh badan oo ay ka kooban tahay oo si fudud loogu heli karo boggaga aad ugu jeceshahay iyo shabakadaha bulshada iyada oo loo marayo biraawsarka.
Software in encode iyo kelmadaha faylasha video. Software wuxuu isticmaalaa isku geynta ee file sare riixo oo bixiya tayada image ugu badnaan.